Ibhokisi yokuThintela ukuLoba
Nge-27 ka-Disemba ka-2020, emva kwentlanganiso yovavanyo yonyaka, i-SIBO yaququzelela umsebenzi wophuhliso olusemgangathweni wabasebenzi abagqwesileyo, ukubanceda bazi ngcono ngokwabo kunye neqela, kunye nokukhuthaza ukukhula kweqela. Emva koqeqesho losuku lonke, nangona umzimba udiniwe, kodwa engqondweni unesivuno esihle, kodwa okona kubalulekileyo kuwo wonke umqeshwa, kwiqela ukuze ube nokuqonda okutsha, oko kukuthi umntu ophucukileyo, ukuzithemba kubalulekile, Uphuhliso lwenkampani, iqela elinomdla nalo liyimfuneko.
Eyokuqala kukwakha iqela. Iqela liqela elenziwe ngabantu abathile ukuze lifezekise iinjongo ezithile. Ziinzame zakhe wonke umntu kwiqela ezenza ukuba iqela libaleke ngokufanelekileyo. Okwesibini kukudibana. Akukho mntu waziyo ukuba uza kuba yintoni umsebenzi olandelayo de ube ngumphathi wabhengeza umsebenzi olandelayo. Ngeli xesha, kufuneka sibe nobumbano olulungileyo, kwaye kufuneka sixoxe ngokubonakalayo kwaye siphakamise izimvo. Nangona kukho iimpikiswano neyantlukwano, sinenjongo enye kuphela, oko kukuthi, ukugqiba umsebenzi ungoyiki. Okwesithathu kukukwazi ukuzama nokwenza. Xa enye indlela isilele, enye indlela iya kusetyenziswa ngokukhawuleza. Xa zonke iindlela zisetyenzisiwe, sifumana eyona ndlela inokwenzeka, eyimeko yokudityaniswa kokuzama nokwenza.
Emva kokuthatha inxaxheba kolu phuhliso, wonke umntu unokuva esona sishwankathelo, athi esona sikhulu sisishwankathelo, cinga ngaso, isishwankathelo asinakwenzeka, ukusuka kwinto encinci ukubona enkulu, bekufanele ukuba senze isishwankathelo esincinci kubomi bangaphambili , emsebenzini weenzame, ukusilela kunye nempumelelo yesishwankathelo. Emsebenzini nakubomi bethu, zininzi kakhulu iindawo ezifuna ukushwankathelwa. Kuphela ngokushwankathela esinokuthi siphucule kwaye kuphela ngokuphucula apho sinokuthi senze inkqubela phambili. Ukushwankathela kukuvumela ukuba ubeke izimvo zakho malunga nexesha elidlulileyo, ujongane ngoku kwaye ubone ngokucacileyo ikamva. Kungale ndlela kuphela apho umsebenzi wethu ungaya phambili ngokuthe chu kwiinjongo ezimiselweyo.